१४६ केजी महिलाले घटाइन् ८२ केजी तौल, यी ३ कुराले घट्यो तौल -
काठमाडौं,गलत खानपान, खराब जीवनशैली, जंक-फास्ट फूड बढी खाने, निद्रा नलाग्ने आदिका कारणले तौल बढ्न सक्छ। त्यसपछि जब उनीहरुले आफ्नो तौल बढेको थाहा पाउँछन् तब उनीहरु खानपान छोडेर तौल घटाउने प्रयास गर्छन् । त्यसो गर्नेहरूले ती मानिसहरूलाई बताउन चाहन्छन् कि तौल घटाउनका लागि खाना र पेय पदार्थ त्याग्न आवश्यक छैन, तर स्वस्थ सन्तुलित आहार र शारीरिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। हालै एक ३५ वर्षीया महिलाले ८२ किलो तौल घटाएकी छिन् । उनको तौल कसरी बढ्यो ? तौल घटाउने उपाय के थियो ? यस बारे पनि जान्नुहोस्।
८२ किलो तौल घटाएकी महिलाको नाम कार्ला पिएरा फिट्जगेराल्ड हो, जो ३५ वर्षकी हुन् । कार्ला डब्लिन, आयरल्याण्डमा बस्छिन्। केही समयअघि उनले आफ्नो फिटनेस यात्रा शेयर गरेका थिए । तौल घटाउने यात्रा सेयर गर्दै कार्लाले आफ्नो तौल लगभग १४६ केजी रहेको बताइन् । त्यसपछि उनले कडा परिश्रम गरे र १४ महिनामा करिब ८२ किलो तौल घटाए । गर्भावस्थामा उनको तौल फेरि बढेको थियो तर फेरि उनको तौल घटेको थियो ।
कार्लाले भनिन्, “मैले २०१९ मा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस गरें। वास्तवमा मलाई सानैदेखि खाने बानी थियो र यो बानीले मेरो तौल निकै बढाएको थियो। करिब १० वर्ष पहिले जब म किशोरावस्थामा, मलाई खानपानमा समस्या थियो र म दुखी हुँदा खाना खान्थें।यसले मेरो क्यालोरीको मात्रा निकै बढ्यो र बिस्तारै मेरो तौल बढ्दै गयो।खाने बानीलाई भावनात्मक रूपमा खाने पनि भन्न सकिन्छ। मोटोपनका कारण मलाई आफैंमा लाज लाग्न थाल्यो र त्यसपछि तौल घटाउनको लागि शल्यक्रिया गर्ने सोच पनि आयो । तर मैले शल्यक्रिया गरिनँ र प्राकृतिक तौल घटाउने योजना बनाएको छु।
कार्लाका अनुसार, उनले आफ्नो खाने बानी परिवर्तन गर्न डाक्टरलाई भेट्ने योजना बनाए। डाक्टरले भावनात्मक खानेकुराबाट बच्न उनीसँग सत्रहरू गरे, जसले उनको खाने बानीलाई नियन्त्रण गर्न धेरै मद्दत गर्यो। त्यसपछि उनले बडी स्लिम कार्यक्रममा भाग लिइन् । यस कार्यक्रममा तौल घटाउन ३ कुरामा मात्र ध्यान दिइन्छ । ती ३ कुरा मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम र आहार हुन् । यी ३ कुराले मात्रै उनलाई तौल घटाउन मद्दत गर्यो ।
यससँगै कार्लाले आफ्नो क्यालोरीको मात्रा नियन्त्रण गरिन्, जसले उनलाई तौल घटाउन मद्दत गर्‍यो। सुरुमा उनले १० हप्तामा १९ केजी तौल घटाएकी थिइन् । प्रारम्भिक तौल घटाउँदा उनलाई धेरै प्रेरणा मिले र उनले आफ्नो यात्रा जारी राखे। यससँगै उनले सन् २०२१ सम्ममा आफ्नो कुल तौल ८२ केजी घटाइसकेका छन् ।
अप्रिल २०२१ मा गर्भवती भएका कारण उनको तौल फेरि बढ्न थाल्यो । यसपछि डाक्टरलाई भेटेपछि उनले गर्भावस्थामा तौल बढ्नु सामान्य भएको बताइन् । त्यसोभए के थियो, बच्चालाई जन्म दिएपछि, उनले आफ्नो पुरानो दिनचर्या सुरु गरे र फेरि उस्तै बनिन्।
कार्लाका अनुसार उनको सफा र स्वस्थ खानाले उनको तौल घटाउन मद्दत गरेको छ । उनले सधैं सक्रिय जीवनशैली अपनाईन्, जसले उनलाई तौल घटाउन धेरै मद्दत गर्यो। उनी तौल घटाउन क्यालोरीको कमीमा बाँच्ने गर्दथिन् । उनको खानपान यसरी नै हुन्थ्यो ।
बिहानको खाजा: कफीबिहानको खाजा : पिनट बटर, फलफूल, स्याउ दिउँसोको खाना: हरियो सलाद बेलुकीको खाना: रोस्टेड टमाटर, पालुङ्गो र फुलकोभी शाकाहारी चटनीसँग,
शारीरिक क्रियाकलापको बारेमा कुरा गर्दै, उनी कार कम प्रयोग गर्थिन् र हिड्न जोड दिइन्, जसले उनलाई क्यालोरी बर्न गर्न धेरै मद्दत गर्‍यो। यसबाहेक भारोत्तोलन पनि उनको दिनचर्यामा परेको थियो । तर यी कुराहरू नियमित रूपमा पालना गर्दा उनको वजन घटाउन मद्दत गर्यो।